Nzọụkwụ 7 iji nwee ihe ịga nke ọma na ahịa ahịa | Martech Zone
Nzọụkwụ 7 iji nwee ihe ịga nke ọma n'ahịa
Ọ kwesịghị ịbụ ajụjụ ọzọ gbasara uru na arụmọrụ nke usoro ịre ahịa ọdịnaya siri ike. Azụmaahịa gị chọrọ nkwekọ obi na-agbanwe agbanwe nke ọdịnaya sitere na ya nke na-adọta uche nke atụmanya, na-ewuli ikike gị na ntụkwasị obi na ntanetị, na n'ikpeazụ na-eme mgbanwe site na ọwa ahịa na mbata gị na ọpụpụ. Enweghị ihe ijuanya site na nke a infographic site na Smart Insights - mana iwu ụlọ a asọmpi atụmatụ ịsọ asọmpi na-omume ọma formulated a mfe digestible infographic.
Iji nyere gị aka nyochaa ma ọ bụ nyochaa etu ị si asọmpi na azụmaahịa gị, maka usoro ọ bụla na infographic ahụ, etinyela m nyocha dị mkpa site na n'efu anyị. Ijikwa ọdịnaya ahịa na akụkọ nyocha 2014 Amara Smart kere na Hubspot.
benchmark ojiji nke ire ahia gi ugbu a.
Zụlite ahịa ọdịnaya atụmatụ.
Ghọta ndị ahịa na akara mkpa site na ọdịnaya.
Mee smart investments n'ahịa ọdịnaya.
Họrọ nke kacha mma mix nke akụrụngwa.
Mepụta ọdịnaya kachasị dị irè usoro.
Iji nchịkọta iji nyochaa ROI na uru.